Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ulawulo lwentando yesininzi akufunekanga lugqitywe ngabagwebi abazinyulileyo
"Ayikho imodeli emiselweyo yedemokhrasi," utshilo i-China kuxwebhu olusemthethweni olupapashwe ngoMgqibelo oluchaza iinzame zayo zedemokhrasi, nokuba ilizwe lilawulwa ngedemokhrasi "kufuneka yamkelwe luluntu lwezizwe ngezizwe, hayi ngokungakhethi sigqibo ngabagwebi abambalwa abazinyulileyo. ”
Idemokhrasi, iphepha elimhlophe elinesihloko esithi "iTshayina: Idemokhrasi eSebenzayo" lathi, "yeyona nto ifanelekileyo" ebisoloko ixatyiswa liQela lamaKomanisi laseTshayina (CPC) kunye nabantu baseTshayina.
“Kwiminyaka elikhulu edlulileyo, iQela likhokele abantu ekuqondeni idemokhrasi yabantu eTshayina. Abantu baseTshayina ngoku babambe ikamva labo nelelizwe neloluntu ezandleni zabo,” lifunde njalo eli phepha.
I-China ibize inkqubo yayo “idemokhrasi yenkqubo epheleleyo yabantu,” emva kokuba uMongameli Xi Jinping ecebise lo mbono kwiminyaka emibini eyadlulayo kwisixeko saseShanghai. Loo mgaqo ugunyazisa ukuthatha inxaxheba kwabantu kwimisebenzi yemihla ngemihla yezopolitiko kuwo onke amanqanaba, ukudibanisa unyulo lwedemokhrasi, uthethathethwano lwezopolitiko, ukuthathwa kwezigqibo kunye nokongamela.
Ubume babantu njengeenkosi zelizwe ngundoqo wedemokhrasi yabantu, lutshilo uxwebhu olukhutshwe yiOfisi yoLwazi yeBhunga laseTshayina.
'Idemokhrasi yaseTshayina inekhonkrithi, izenzo zepragmatic'
“E-China, umgangatho wokuziqhelanisa kukuva amazwi abantu, wenze ngokweemfuno zabo, kwaye udibanise izimvo namandla abo,” latsho eli xwebhu.
Ngokutsho data esemthethweni, China iye yabamba 12 unyulo ngqo kwiinkongolo zabantu kwinqanaba elokishini kunye 11 unyulo ngqo abo kwinqanaba okwilizwe, kunye nenqanaba inxaxheba ngoku malunga 90 ekhulwini, ukususela ukuqaliswa uhlaziyo kunye nokuvula up.
Ukubonisana ngedemokhrasi luphawu olukhethekileyo lwedemokhrasi eTshayina. Abantu baseTshayina balisebenzisa ngokubanzi ilungelo labo lokuvota kunyulo baze baqhube iingxoxo ezinzulu ngaphambi kokuba kwenziwe izigqibo ezinkulu.
Eli phepha likwagxininise ukuba ukusetyenziswa kakubi kwegunya ukuze kuzuze wena kupheliswa ngokubekw' esweni kwedemokhrasi evakalayo nesebenzayo.
Ukongamela amandla kunabela kuyo yonke indawo nakwikona zonke, yatsho.
Imodeli yaseTshayina yedemokhrasi
Endaweni yokukhuphela nje imifuziselo yedemokhrasi yabanye, iTshayina ithathela ingqalelo "iimeko zelizwe kunye neenyani" kwaye ibonakalise ubunyani bayo.
"I-China itsalela kuyo yonke impumelelo yezopolitiko yamanye amazwe, kodwa ayixelisi nayiphi na imodeli yedemokhrasi," latsho eli xwebhu. "Imodeli efanelekileyo kakhulu ihlala ifanelekile."
Idemokhrasi yabantu benkqubo epheleleyo ihambelana neempawu zelizwe ezahlukileyo, nto leyo ebonisa kwangaxeshanye “umnqweno woluntu jikelele wedemokhrasi.”
Iphulo loluntu lokufuna kunye nokulinga idemokhrasi enkulu soze liphele, litshilo eli phepha.
Umqobo wokwenyani kwidemokhrasi awukho kwiimodeli ezahlukeneyo zedemokhrasi, kodwa kukuzingca, ucalucalulo kunye nobutshaba kwiinzame zamanye amazwe zokuphonononga iindlela zabo zedemokhrasi, kunye nokucingelwa ukongama kunye nokuzimisela ukunyanzelisa imodeli yedemokhrasi kwabanye, yongeza.